ऋण को डिग्री के छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki gearing
5 लाख ऋण एक कम्पनी वा एक समुदाय छ, धेरै लाग्छ। तर यो अनुकरणीय योग कम्पनी, नगरपालिका वा एक राज्यको ऋणको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दैन। बरु, एकलाई ऋणको डिग्री चाहिन्छ gearing, तथापि, कर्जा को डिग्री न केवल पूरा ऋण को रूप मा, तर अन्य आर्थिक आंकडे पनि एक भूमिका निभािन्छ। यी समावेशहरू, उदाहरणको लागि, राजस्व, वा अझ ठीक छ, उत्पन्न हुने लाभ। पछि सबै खर्च को कटौती पछि, निर्णायक छ, इक्विटी र पनि ऋण तिर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। वित्तीय सर्तहरुमा, ऋण अनुपात ऋण र इक्विटी को बीच अनुपात द्वारा निर्धारित हुन्छ।
ऋण को डिग्री मा अंतर
ऋण को सामान्य डिग्री को अतिरिक्त, अझै पनि एक अन्य विविधता छ। यसमा समावेशको लागि, गतिशील ऋण अनुपात। ऋण को गणना इक्विटी मा आधारित छैन, तर नगद प्रवाह मा। निस्सन्देह, प्रश्न उत्पन्न हुन्छ, किन एक कम्पनी, एक नगर पालिका वा एक राज्यमा ऋण को डिग्री निर्धारण गर्नु पर्दछ? यो मुख्य रूप देखि वित्त पोषण को कारण हो। प्रायः बैंक र वित्तपोषण कम्पनीबाट ऋण तिर्न आवश्यक छ। निस्सन्देह, तिनीहरूले क्रेडिट हानिको जोखिम जित जितै कम राख्न चाहन्छन। तथापि, वित्तीय विवरणहरू वा मनपराएका प्रायजसो वित्तको वास्तविक अवस्थामा सानो जानकारी दिन्छन्। केवल किनभने यो मात्र स्न्यापशटहरू एक वर्षसम्म सीमित छ र समग्र अवलोकन छुटेको छ। ऋण को डिग्री मा जानकारी प्रदान गरेर, बैंक ले आकलन गर्न सक्छ कि अर्को ऋण र परिणामस्वरूप चुकौती र ब्याज दर पनि संभव हो। ऋण को उच्च डिग्री, कम नि: शुल्क पूंजी एक कम्पनी या नगर पालिका छ। तदर्थ, वृद्धि संग पनि तरलता कम हुन्छ, तब त्यस पछि हुन सक्छ कि थप ऋण अब वा अब वांछित उचाइमा प्राप्त हुन सक्छ। र यद्यपि यदि बैंकिङ्ग अझै पनि उधारिन्छन् भने, उनीहरूको उच्च ब्याज दर हुन सक्छ वा संपार्श्विक आवश्यक पर्दछ। अन्ततः शैतानको सर्कलमा विकास गर्न सक्दछ, किनकि यसले ऋणको स्तरमा बढ्दो वृद्धि गर्न सक्छ, जसले गर्दा ऋण र स्थिरतामा स्थिर असर पर्दछ।
गम्भीर परिणामहरू माथिल्लो सीमाको रूपमा हुन सक्छ
यद्यपि, भित्तिता को डिग्री अन्य सन्दर्भहरुमा बेवास्ता गर्न सकिँदैन। यदि, उदाहरणका लागि, अनुदान अनुगमन पहिले देखि नै अवस्थित छ, ऋणको लागि माथिल्लो सीमा सेट गर्न सकिन्छ। यो ऋण-प्रति-इक्विटी अनुपातमा बनाइएको छ। यदि यो स्तर नाघ्यो भने, यो गम्भीर परिणाम हुन सक्छ। यदि यो सम्झौताको वस्तु हो भने, यो सम्झौताको उल्लङ्घन हो। सामान्यतया, ऋण घटाउनको लागि छोटो समय पछि, वित्त अनुबंध समाप्त हुन्छ। त्यसपछि, त्यसोभए, असाधारण दायाँ समाप्ति, जुन त्यसपछि सबै क्रेडिट दावीहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा भुक्तानीको परिणाम हुन्छ। यो देखि देख्न सकिन्छ, ऋण को डिग्री केवल एक डिग्री प्रदान गर्न को लागी एक अनुबंध को एक अभिन्न भाग न केवल प्रदान गर्न सक्छन्। यसकारण, कम्पनीहरू सामान्यतया सम्बन्धित छन् कि कर्जाको स्तरको जित जितै कम रहन्छ।
अघिल्लो लेखएसी छुट क्रेडिट